We She Me: ဆားပုလင်း Wives
| FLAGS: Mom (She) , she
pandora - 6/28/07, 3:23 PM
ဟိုက် ရှာလပတ်ရည်.. .. သတိထားမှ.. စပိုင်ပန်ဒိုရေမွန်တို့ စပိုင်ဂျစ်တို့တော့ အပြိုင် ဆားပုလင်း ပေါ်လာပြီ..။
Andy Myint - 6/28/07, 3:38 PM
ဟားဟား… အပျော်တမ်းပါ… မကြောက်ပါနဲ့။
imaginary clouds no2 - 6/28/07, 3:51 PM
ကွမ်းစကား စာစုများကဲ့သို့ သော အရသာကို ပေးပါတယ် ။ ရေးတာမိုက်တယ် ။ “အမေက တရုတ် မဟုတ်ပေမယ့် အများနည်းတူ သတင်းစာကို နောက်ဆုံးကနေ စလှန်ပါတယ်။ နာရေးကြော်ငြာကနေ စဖတ်ပါတယ်။ `ဟယ်...ဘယ်သူတော့---
Andy Myint - 6/28/07, 4:22 PM
ကွမ်းစကား စာစု? ညံ့လိုက်တာ မကြားဖူးဘူး။ ကိုယ့်စာကို ပြန်ဖတ်မှပဲ အထားအသိုတွေ မှားနေတာ တွေ့တော့တယ်။ ``အများနည်းတူ သတင်းစာကို နောက်ဆုံးကနေ´´ ဆိုတာထက် `` သတင်းစာကို အများနည်းတူ နောက်ဆုံးကနေ´´ ဖြစ်ရမှာပေါ့။ မတတ်နိုင်တော့ဘူး.. Comment တောင်ရေးပြီးပြီဆိုတော့ မပြင်တော့ပါဘူး
imaginary clouds no2 - 6/28/07, 4:36 PM
Andy ရေ ကျနော် ကတော့ စာရေးရင် စကားပြော သလို ပဲတီးပစ်လိုက်တာ ။ မှားတာဟာ မသေလောက်ရင် သူတပါးကို (ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြီး) မထိခိုက်ရင် ပြီးတာပါပဲ ။ ဘယ်သူကမှလဲ ဒီ ဘလော့ကာ ရေးသလို လိုက်တုပရေးမယ်လို့ မထင်ယုံမက ၊ ယုံကို မယုံကြည်ဘူး ။ ကိုယ်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မဟာ ကိုယ်ကို နောက်ထပ်ချည်နှေင်တဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်းဇြစ်နေရင် မမိုက်တော့ဘူး ။ အများကို ဂရုမစိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး ။
Andy Myint - 6/28/07, 4:40 PM
ဟုတ်တယ်ကွ။ အဟဲ။ လက်က စိတ်နောက်ပါတုန်းလေး ရေးရတာ… ရေးပြီးရင်လည်း ချက်ချင်းဆို ချက်ချင်း တင်ချင်နေပြီ။ မစစ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
imaginary clouds no2 - 6/28/07, 5:38 PM
yes, that it's. u c. my last comment the word " mistake" or "error" only means typing mistakes or grammar mistakes ( english or myanmar ) . but it can lead to other direction and define others meanings. ha ha. .. . it is also the same for " happiness " . sometimes words are not enough to describe the emotion and the feeling. to err is human. ha hhha--:)
Phyo Wai Kyaw - 6/29/07, 2:08 AM
AKM, I like this post. My mom also like that. :)
Andy Myint - 6/29/07, 3:22 PM
အင်း….. အမေ အမေချင်းဆိုတော့ နားလည်တာပေါ့။ `ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုံးက...´တွေ ဆက်ရေးပါဦးဗျ။ ဖတ်လို့ကောင်းလို့။
SuN - 6/30/07, 4:24 PM
A lot of free time, That's why they can do that.. haha..
What if they are working mom?
Would they even have time to read justapage from newspaper?
Andy Myint - 6/30/07, 6:06 PM
Quite right, SuN.... life ofaworking mom is so pity.... that why we had to makeahard decision to give up her job....
T T Sweet - 12/4/10, 2:58 AM
ဒီပို့စ်ကို သိပ်သဘောကျတယ်။ ကျွန်မနဲ့ တူနေလို့။ ကိုအန်ဒီ့အမေလိုပဲ စလုံးမှာဖြစ်ဖြစ် နာမည်ကြီးအမှုဖြစ်လို့ကတော့ ရေဆုံးရေဖျား ဖတ်တော့တာပဲ။
ဘလော့ဂ်တွေဖတ်တာလဲ သူမနဲ့တူတယ်။ ခုပဲကြည့် ကိုအန်ဒီ့ဘလော့ကို အစအဆုံးမွှေနေပြီ။ အရင် တစ်ခါမွှေပြီးသားနော်။